Waallida Shakiga: Nin Haweenay U Doonanayd Silsilad Iyo Qufulo Ku Wareejiyay Jidhkeeda Si Aan Raggu Ugu Soo Dhawaan - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Waallida Shakiga: Nin Haweenay U Doonanayd Silsilad Iyo Qufulo Ku Wareejiyay Jidhkeeda...
Waallida Shakiga: Nin Haweenay U Doonanayd Silsilad Iyo Qufulo Ku Wareejiyay Jidhkeeda Si Aan Raggu Ugu Soo Dhawaan
Waxa ay u muuqataa in waallida ka dhalata Hinaasuhu aanay ahayn wax xad leh ama meel ku joogsan kara ee ay qofka ka keento xataa tallaaabo aanu qaadeen ama ku dhaqaaqeen qofka xunuuka dhimirka qabaa. Shaki la’aan dunidu waxa ay ka midaysan tahay Waallida ka dhalata Hinaasaha rag iyo dumarba si kasta oo caadooyinkooda iyo diintoodu u kala duwan tahay, waxa kale oo jira shakiga la xidhiidha lammaanuhu in uu isna yahay mid aan la xakamayn Karin wakhtiyada qaarkood tallaabooyinka ka dhasha. Dhacdo haddii aad maqasho aad u qaadanayso mid khayaal ah balse ah xaqiiqo biyo kama dhibcaan ah ayaa todobadkan shabakadda wararka ee CNN waxa ay ka soo warisay wadanka Mexico. Nin u dhashay dalkaasi Mexico ayaa la sheegay in uu silsilad shabag ah ku wareejiyay Surwaal ay xidhnayd haweenay ay muddo isku cindanaayeen oo u doonan si uu u guursado silsiladaasi oo dhinac walba uu quful kaga jabiyay si aanay haweenaydani xidhiidh rag u samayn oo uu sharafteeda u ilaaliyo sida uu ku dooday, isaga oo intaa ka hinaasan in ay gogol dhaaf samayso. Sida uu ku soo warramayo Telefishanka CNN, Gabadha Merry Sanchez oo 25 jir ah oo ku nool xaafadda dadka saboolka ahi degaan ee magaalada Escatalmi ee dalka Mexico ayaa laga war helay in aanay si wanaagsan u socon Karin sidoo kalena dhakhtarka deegaankaasi ugu dacwootay in ay xanuun ka dareemayso miskaha iyo lugaha hoose. Markii haweenaydan la baadhay waxa loogu tagay silsilad ku xidhan Surwaalka ay xidhan tahay ee Jiiniska ah oo ku wada duuban dhammaan inta ku beegan cawradeeda laga bilaabo jilbaha korkooda illaa miskaha, sidoo kalena qufulo yaryari ku wada jabsan yihiin si aanay isaga furin. Haweenaydan ayaa muddo saddex bilood ah waxa ay ku jirtay xaalad sidan u qallafsan iyada oo mudadaasi surwaalka ay xidhnayd ka dul gashatay haaf suuf ah oo qaro leh si aanay dadku u arag silsiladdan ku jabsan ee qufulku ka laalaado. Dakhtarkii isku dayay in uu cabashada haweenaydan dhagaysto ayay u suurta gashay in uu wax ka ogaado sidan ay gabadhan yari u dhibban tahay waxaanu toos ula xidhiidhay booliska xaafaddaasi ka hawl gala si uu arrinkan ugu sheego. Baadhitaankii booliska kadib waxa ay haweenaydani qiratay sida xaal u dhacay waxaanay saldhigga hortiisa ka sheegtay sidan: “Hugo Martino oo 40-jir ah ayaanu muddo saddex sanadood ah wada soconay. Waxa aanu ku ballanay guur. Anigu waxaan ka soo jeedaa qoys aad u sabool ah. Isaguna waa mid dabaqadda dhexe ah oo lacag ku filan haysta. Waxa uu ii ballan qaaday in uu I guursan doono qoyskayagana lacag siin doono si ay ganacsi yar ugu samaystaan. Balse muddo bil ah markii aanu wada soconay waxa uu soo qaatay silsilad iyo lix quful oo yaryar. Waxa uu igaga wareejiyay intaa misigta illaa bawdyaha. Qufuladiina waa uu igu xidhay. Waxa uu ii sheegay in uu sidan u samaynayo si aan cidi iigu soo dhawaan gaar ahaan raggu. Muddo ayaan qarsanayay maantana waxa aan hayn kari waayay xanuunka iyo dhibta ay igu hayso waxaanay iigu darnayd marka aan doonayo in aan suuliga tago, balse cabsi aan ninka ka qabo darteed cidna uma sheegin”. Arrintan ayaa layaab ku noqotay dadkii deegaanka ee warkani soo gaadhay waxaana ninkii falkan gaystay ee Mushakiga ahaa oo markii dambe qirtay lagu xukumay ganaax lacageed iyo xadhig.
Somalia struggles to cope with aftermath of blast
Somaliland: Siyaasi Cabdkariim Axmed Mooge Oo Soo Bandhigay Qaab Ay Shirkada DP World U Maamusho Dhaqaalaha Dekedda.
Somaliland: Siyaasi Xamarje Oo Si Kulul Ucanbaareeyay Xadhiga Ramaax,Eedo Culusna Ujeediyay Madaxwayne Biixi
Somalia: Cida ka dambeysa dib u dhaca isdaba jooga ah ee ku yimid doorashdaa Dalka Somalia oo la shaaciyey
Madaxweyne Caan Ah Oo Shacabkiisa Amray Inay Eyda Qashaan, Kadib Cunto Yaraan Soo Waajahday